Sida loo soo dejisto NBA Jam si bilaash ah mahad IGN | Wararka IPhone
Hal bil oo dheeri ah, daabacaadda ciyaarta fiidiyowga IGN waxay siisaa dhammaan akhristayaasheeda ciyaar gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala macruufka. Markan, ciyaarta la soo xulay waa NBA Jam, kaas oo aan ugu raaxeysan doonno NBA si buuxda qalabka moobiilkaaga. Tani waa markii ugu horreysay ee ciyaarta NBA Jam la heli karo si loogu soo dejiyo iyada oo loo marayo dallacsiin, illaa iyo hadda, EA Sports kuma aysan darin wax dallacsiin ah ama dalab ah halka ay ka dhigeyso mid ka qiimo jaban.
NBA Jam waa ciyaar qadiim ah oo ka socota 90-meeyadii oo mar kale la sii daayay mahadnaqa iOS. Ciyaartan waxaan u adeegsan karnaa ciyaartooydii ugu halyeeyga kubbadda koleyga oo lagu xasuusto kii ugu da'da weynaa meesha Michael Jordan, Larry Bird, Scotty Pippen, Magic Johnson, Dennis Rodman (taas oo aan markii hore ku qasbanaaneynay inaan furno)
Ku soo dejiso NBA JAM for iOS bilaash
Marka hore waa inaan tagnaa qaybta bogga IGN aaway kor u qaadkii bishan.
Marka xigta waxaan tagnaa sanduuqa casaanka oo leh xarfaha GAME FREE GAME oo aan riixno.
Daaqada xigta ayaa na tusi doonta lambar kor u qaadis ah oo aan gujineyno si aan toos ugu iibsanno qalabkeenna si markaas soo dejintu u bilaabato.
Dhiirrigelintan waxaa la heli karaa illaa iyo Juun 7, 2015. Dhiirrigelintan, sida kuwii hore oo kale waxaa kaliya laga heli karaa wadamada soo socda: Mareykanka, Algeria, Armenia, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Canada, Chad, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Ireland, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malaysia , Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Portugal, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Ukraine, United Kingdom iyo Vietnam.
WAKHTIGA: In kasta oo nooca uu IGN ku bixiyo soo dejinta bilaashka ah uu la jaan qaadayo iPhone, iPod iyo iPad Touch, nooca la soo dejistay waa nooca iPhone, maaha nooca gaarka ah ee iPad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Sida loo soo dejisto NBA Jam si bilaash ah mahad IGN
Bilaash NBA Jam bishaan mahad IGN. Waxaan ku tusaynaa sida loo helo.